I-MX Linux 19: Uhlobo olusha olususelwa ku-DEBIAN 10 selukhishiwe | Kusuka kuLinux
Kwezinye izikhathi sibhale ngazo «MX Linux» kubhulogi (Bona okuthunyelwe kwangaphambilini). Futhi kwalokhu sekucacile kithina, ngoba okufanayo nanamuhla, kungoku indawo yokuqala ku-portal I-DistroWatch. Nokho, masikukhumbule lokho «MX Linux» Kuyinto a Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux lokho kuzalwe njengomphumela wokubambisana phakathi kwabathuthukisi nabasebenzisi bemiphakathi yabanye abangu-2, okungukuthi, I-AntiX y I-MEPIS.
«MX Linux» kugqame phakathi kwabaningi, ngoba le Miphakathi inikele ngamathuluzi namathalente ayo angcono kakhulu ukuwakha un Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux ilula kepha inamandla, yakhelwe ngaphansi komqondo wokunikela nge- ideskithophu enhle futhi esebenza kahle ngokusetha okulula, ukuzinza okuphezulu nokusebenza okuqinile. Futhi konke lokhu ngosayizi wesithombe se-ISO okuncane ngokwanele ukulanda, ukusebenzisa nokusabalalisa okulula.
Lokhu kuhle futhi kuyasebenza Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux inomsuka, ngokusho kwe-DistroWatch, IsiGreki neNyakatho Melika (iGrisi / i-USA), nokho ngama-initials «MX» kuvame ukukholelwa ukuthi inomsuka waseMexico. Lapho empeleni, incazelo yalezi zinhlamvu ezi-2 ivela esenzweni se hlanganisa uhlamvu lokuqala lwe-MEPIS nohlamvu lokugcina i-AntiX, okufanekisela ukusebenzisana phakathi kwemiphakathi yayo emibili eyasungula futhi isathuthuka.
Lokhu futhi kwavumela ukuthi kube njalo kufakwe kusayithi I-DistroWatch, njengenguqulo ye- I-antiX, kodwa ngaphansi kwayo ikhasi njengokusatshalaliswa okuzimele ngokukhululwa kwefayela le- I-MX Linux 16 beta yomphakathi yokuqala, Novemba 2, 2016. Kuze kube namuhla, iphrojekthi isendleleni ye- «versión 19» shayela «Patito Feo», esizoyichaza kafushane kamuva. Yize uma ufuna ukwazi kabanzi nge «MX Linux» ungaya kufayela lakho le- iwebhusayithi esemthethweni futhi ubone yonke imininingwane esemthethweni etholakalayo futhi landa i-ISO yayo.
1 I-MX Linux 19: I-Ugly Duckling
1.1 Ukuvuselelwa kwezicelo zangaphandle
1.2 Ukuvuselelwa kohlelo lokusebenza kwe-MX
1.3 Ukubuyekezwa kohlelo lokusebenza lwe-AntiX
1.4 Okunye okuhlukahlukene
I-MX Linux 19: I-Ugly Duckling
Ngokwe-website esemthethweni ye- «MX Linux», Kuyinto «versión 19» o «Patito Feo» Inezici ezilandelayo, ukusebenza nezinhlelo:
Ukuvuselelwa kwezicelo zangaphandle
Izinqolobane: Kufaka phakathi i-DEBIAN 10.1 (Buster), i-AntiX ne-MX Linux.
Imvelo yedeskithophu: I-Xfce 4.14
Umhleli we-Imagen: I-GIMP 2.10.12
Imitapo yolwazi yevidiyo: I-MESA 18.3.6
Ama-firmwares: Ukuvuselelwa okuhlukahlukene.
IKernel: Uhlobo lwe-4.19
Isiphequluli: I-Firefox 69
Isidlali sevidiyo: I-VLC 3.0.8
Isiphathi Somculo (Isidlali): UClementine 1.3.1
Iklayenti le-imeyili: Thunderbird 60.9.0
I-Office Suite: I-LibreOffice 6.1.5 (Ngamapheshana abo okuphepha)
Ezinye izinhlelo zokusebenza: Kuvuselelwe kusuka kumakhosombe we-DEBIAN neMX Linux atholakalayo.
Ukuvuselelwa kohlelo lokusebenza kwe-MX
Isifaki: Ngokuya ngesifaki seGacela (Gazelle), kulungiswe ukulungisa okuphathelene nokuphathwa kwezinqubo zokubala imali nokuhlukanisa.
Idethi nesikhathi: Izinguquko ezenza ukwenziwa kwemisebenzi kuwashi lesistimu.
Ukufomatha i-USB: Isicelo sokuphatha imisebenzi yokufomatha idivayisi yesitoreji se-USB.
Isifaki sephakheji: Manje kufaka ukuboniswa kwezinombolo zohlobo lwezinhlelo zokusebenza zeFlppak. Ngaphezu kwalokho, izibuyekezo zeLibreOffice ziyatholakala kusuka kuma-DEBIAN Backports Repositories.
Izexwayiso: Iphakheji yokuthumela imiyalezo ephuthumayo kubasebenzisi besistimu.
Isibuyekezi: Ayisadingi iphasiwedi yomlawuli ukuze ihlole izibuyekezo ezisalindile kepha isadinga ukuyihambisa.
Izithombe zangemuva: Kufaka phakathi ukulingana okusha.
Isihleli seBash (iBash-config): Uhlelo olusha olunikezelwe ukuthuthukisa isethulo esibonakalayo semvelo ye-bash nokuphathwa kweziteketiso kuso.
Ukulungiswa kwe-boot: Kubuyekezwe ukusekela (ukulungisa) izimo ezahlukahlukene kakhulu zomonakalo orekhodiwe.
Izindikimba zedeskithophu: Kufaka amatimu amasha.
Izinguquko ezahlukahlukene: Ukuvuselelwa okuncane kuwo wonke amathuluzi wakho we-MX Linux, ukufakwa kwamafayela amaningi osizo esithombeni se-ISO, inketho ye-FAQ ebuyekeziwe enezihumusho ezifakiwe.
Ukubuyekezwa kohlelo lokusebenza lwe-AntiX
Izibuyekezo ze-Live AntiX System, kufaka phakathi ezinye izilungiselelo zevidiyo.
Ukwaziswa okusekelwe embhalweni okususelwa kumbhalo wolwazi.
Ukulungiswa ezingeni lemodi yokuqalisa ividiyo “ephephile” kumenyu ebhuthini ebukhoma.
Ukuthuthukiswa kokusekelwa kwasendaweni: Cishe zonke izinhlelo zokusebenza ze-MX manje zifaka izibuyekezo zokuhumusha.
Njengoba sibona «MX Linux» Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux okunikezela ngezici eziningi nezinsiza kumphakathi waso womsebenzisi. Futhi kunjalo «versión 19» shayela «Patito Feo», ukuxhuma okukhulu kusuka enguqulweni edlule, ngoba kusiletha isisekelo se UDEBHANE 10 yendlela ende yezinguquko nezibuyekezo kuyo. Yebo, basebenzisa noma bathanda ukusebenzisa «MX Linux», sincoma la maqembu we yocingo ngakho ukuze bakwazi ukujoyina futhi babelane ngokuhlangenwe nakho kulokhu: I-MX ngeSpanishi, I-MX Linux ne-AntiX Spanish y Iphrojekthi yeTic Tac.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-MX Linux 19: Ikhishwe inguqulo entsha esekwe ku-DEBIAN 10